ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको उपस्थितिमा चितवन समाज इजरायलले छैठौ जन्मदिन भब्य मनायो ! | शुभ दिन
ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको उपस्थितिमा चितवन समाज इजरायलले छैठौ जन्मदिन भब्य मनायो !
चितवन समाज इजरायलको छैठौं जन्मदिनमा केक काटि पिक्निक कार्यक्रम समेत गरि इजरायलमा जन्मोत्सव मनाइयो ।
2014 फेब्रुअरी 14 मा स्थापना भएको चितवन समाज इजरायलको जन्मदिन धुम धाम सग इजरायलको पार्क यार्कोनमा मनाइएको छ ।
हिजो शनिबार दिउँसो एक कार्यक्रम गरि ख्याती प्राप्त कलाकार हरुको साथ मनाइएको हो । कार्यक्रम सभापती सस्थाका अध्यक्ष श्री नयन सापकोटा ज्यु को सभापतित्वमा औपचारिक कार्यक्रम सुरु भएको थियो । प्रमुख अतिथीमा चितवन समाज इजरायलको संरक्षक तथा चितवन सेवा समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिती प्रबाश महिला प्रमुख श्रीमती सरिस्मा बराल रहनु भएको थियो। विशेष अतिथी nrna इजरायल अध्यक्ष तथा चितवन समाज इजरायल सस्थापक अध्यक्ष श्रीमती शान्ता ज्ञावलि अधिकारी रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल बाट आमन्त्रित ख्यातिप्राप्त कलाकारहरु राजा राजेन्द्र पोख्रेल ,बैगुन्ठ महत,रबि ओड ,पुरुष्वतम पौडेल ,अमृत खातिलाइ अतिथिको आशण ग्रहण गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा सस्थाका सल्लाहकार तथा सस्थाका अन्य पदाधिकारीहरु लगाएत विभिन्न संघ सस्था बाट आमन्त्रित पदाधिकारी हरुलाइ समेत यथा स्थानमा आशण ग्रहण गर्नु गराइएको थियो ।
कार्यक्रम सभापती तथा प्रमुख अतिथी,विशिष्ट अतिथिबाट केक काटि जन्मदिन मनाइएको थियो ।
छोटाे मन्तब्य सहित आगन्तुक चर्चित राष्ट्रिय कालाकारहरुलाइ चितवन समाज इजरायलको तर्फबाठ मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।
चितवन समाज इजरायलको जन्मदिनको पावन अबसरमा सस्था लगाएत सबै सस्थापक सदस्यहरु ,आजिबन सदस्यहरु सल्लाहकारहरु लाई सस्थाको जन्मदिनको शुभकामना प्रदान गर्दछौ ।
कार्यक्रम सस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी मिश्रले कुशलता पुर्बक सन्चालन गर्नु भएको थियो
मिस्ठान्न भोजन पिकनिक सहित कार्यक्रममा धेरै साथिभाइ हरुको आगमनले रौनकता प्रदान गरेको थियो
सस्थाको ब्यानर सल्लाहकार श्री अनि रुद्र सुवेदी जि र केक सस्थापक अध्यक्ष श्रीमति शान्ता अधिकारीले सौजन्य गर्नु भएको थियो । सभापती बाट सबैलाइ धन्यवाद सहित कार्यक्रम समापन गर्नु भएको थियो ।
यस जन्मदिनमा पिक्निक कार्यक्रममा सहयोग गर्नु हुने सम्भु खनाल,राज दाहाल,सुमि साही,गणेश गिरि,रमेश सर लगाएत सस्था तर्फका सबै आजिबन सदस्यहरु,कार्यसमिति पदाधिकारीहरु कार्यक्रममा उपस्थित सबै आगन्तुक ब्याक्तित्वहरुलाइ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो